Pigzbe ilay fampiharana mampianatra ny ankizy momba ny cryptocurrency | Famoronana an-tserasera
Pigzbe ilay fampiharana mampianatra ny ankizy momba ny cryptocurrency
Melisa Perrotta | | Graphic Design, Inspiration, teknolojia
Ity fampiharana noforonin'i Filippo Yacob ity dia miompana amin'ny ankizy mihoatra ny enin-taona. Izy io dia miasa toa banky misy piggy ahafahan'ny zaza tsy ampy taona mitahiry vola virtoaly. Ny tanjony dia ny mampianatra momba ny cryptocurrency ary mamporisika ny tahiry.
Ny fampiharana dia miasa amin'ny alàlan'ny a Serivisy Blockchain antsoina hoe Wollo, ny voalohany natao ho an'ny ankizy. Amin'izany fomba izany dia mamporisika ny ankizy hamonjy vola amin'ny fiarahamonina tsy manam-bola, izay sarotra amin'ny fitehirizana fampiharana amin'ny alàlan'ny piggy izay tsy mamela famindrana kely na handoa sarany lafo.
Raha ny filazan'ny CEO Yacob, Ny fahalalana momba ny vola aloha dia lakilen'ny fampivelarana ny fahazarana ara-bola tsara. Na izany aza dia nampitandrina izy fa mety hanjary ho sarotra amin'ny ankizy ankehitriny izany noho ny fanjavonan'ny vola. Ny fanjavonan'ity singa ity dia mety ho olana amin'ny fampianarana rafi-pitantanana sy ny vola ho an'ny ankizy.
Etsy ankilany, nanazava ihany koa ny mpanatanteraka fa rehefa mitady fangatahana piggy banky ho an'ny zanany lahy; tsy nahita tsy misy na inona na inona mamela anao handoa vola kely. Tsy izany ihany fa ireo banky piggy niomerika ireo koa dia nahatratra hatramin'ny 50 cents ny famindram-bola 50 cent.
Ahoana no fomba fiasan'izany
Raha ampitahaina amin'ny fifaninanana Pigzbe dia mampiasa fampiharana handefasana vola amin'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Izy io dia vita amin'ny kinova toy ny lalao milentika, miaraka amina dynamics mahafinaritra sy fampiasana intuitive. Fa kosa, ny olon-dehibe mampiasa kinova tsotra kokoa.
Ahitana a fitaovana izay miasa miaraka amina fampiharana hilalaovana. Amin'izany fomba izany, ny fitsitsiana dia hetsika mahafinaritra. Ny ampahany tsara indrindra dia ny famelana ny fianakaviana hamindra vola kely ao anatin'ny segondra.
Izy io koa dia misy remote mavokely ahafahan'ny ankizy mifehy lalao ary mahazo fampandrenesana avy amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana. Etsy ankilany misy fanaraha-maso mainty natokana ho an'ny ray aman-dreny izay afaka mitahiry vola Wollo ivelan'ny Internet.
Ary farany, ahafahanao mamantatra ny fifanakalozana na fividianana ankizy rehetra. Izany dia azo atao noho ny Wollo Card, izay azon'ny olon-dehibe na ankizy ampiasaina amin'ny fivarotana an-tserasera sy an-tserasera marobe. Ho fanampin'izany, ny karatra dia ahafahan'ny ray aman-dreny mametra ny zanany tsy hividy alikaola, paraky sy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Pigzbe ilay fampiharana mampianatra ny ankizy momba ny cryptocurrency
Lalàna 10 hitarika tetik'asa famoronana tsara
Torohevitra 4 ho voalohany amin'ny motera fikarohana Google